Ndị na-eme ama ama ama ama ama na ama ama n'ahịa ndị India | Gam akporosis
Ndị na-eme ama ama ama na China na-achịkwa ahịa India
na Ndị na-eme ama ama China mụbaa ahịa ha na India na nkeji nke mbụ nke 2019.
El Nkwupụta nyocha nke counterter kpughere nke ahụ anọ n'ime ụlọ ọrụ ama ama ama ama ise na India bụ ndị China ma ha enwetala ahịa siri ike nke 66% na nkeji iri na ise nke afọ a.
Onu ahia nke Xiaomi dara site na 31% na nkeji iri na ano nke 2018 rue 29% na nkeji mbu nke 2019, ebe Vivo dere onu ogugu di ukwuu na uzo ahia ya n'otu oge, na-ebili site na 6% nke afo gara aga rue 12 di egwu. % na nkeji nke mbụ nke afọ a. Ọbụna Realme hụrụ mmụba ngwa ngwa na òkè ahịa ya, na-ejide ezigbo 7% òkè na ahịa asọmpi a. Onu ahia OPPO rutere elu nke nta rue 7%.
Onu ahia ahia nke ebu ahia nke Samsung dara ntakịrị na 23% na nkeji iri na ise, gbadata 3% na afo gara aga. Agbanyeghị, ụlọ ọrụ ahụ nwetụrụ oge na ahịa ekwentị njirimara, na-abawanye site na 10% na nkeji iri na ise nke 2018, rue 15% na nkeji iri na ise nke 2019.
Jio ka na-achịkwa mpaghara ekwentị yana òkè 30%. Akụkọ ahụ kwukwara na Usoro South Korea Galaxy S10 na-eme nke ọma na mba ahụ, na-abawanye Average Selling Price (ASP) na mpaghara ahụ.
Branddị ọzọ jisiri ike mee nke ọma n'ahịa ndị India bụ ASUS, karịsịa na ngalaba mmefu ego, ekele maka usoro Zenfone ya. Tecno na Nokia HMD na-emekwa ọfụma. Ọganihu nke ụdị ahịa nke ụdị ndị China emeela ka mbelata nke mbupu nke ụdị ndị India. Nkeji iri na ise gara aga nwere ọnụahịa dịkarịsịrị ala maka izipu ngwa ahịa ndị obodo Indian.
Isi ihe ọzọ dị mkpa a kpọtụrụ aha na akụkọ ahụ bụ na Samsung karịa OnePlus na Q2019 XNUMX ịghọ onye na-emepụta ama ama ama ama na ngalaba nke kachasị elu. Nyere na OnePlus 7 Pro ga-amalite na May 14, anyị nwere ike ịhụ ụfọdụ mgbanwe na ngalaba a na mpaghara na-abịanụ.
N'ikpeazụ, ọtụtụ ụlọ ọrụ ama ama na-agbasi mbọ ike na ire ere ahịa. Xiaomi, OnePlus na ọbụna Realme ritere uru site na itinyekwu uche na ụlọ ahịa brik na itema ọ bụ. Ya mere, anyị nwere ike ịtụ anya na atụmatụ ahụ ga-aga n'ihu na mpaghara ndị na-abịanụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ndị na-eme ama ama ama na China na-achịkwa ahịa India
Nubia's Red Magic 3 na-egosi akwara na Geekbench. The kacha mma egwu egwuregwu ama na ahịa?